Maamulka G/Shabeellaha Hoose oo ka hadlay weerarkii saakay | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maamulka G/Shabeellaha Hoose oo ka hadlay weerarkii saakay
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Adan Cali (Najax) ayaa saacado kadib waxaa uu ka hadlay weerar Xubno ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab ay saakay waberigii hore ku qaadeen Saldhig Cidiamada Dowladda ku leeyihiin deegaanka Ceel-Saliini ee Gobolkaas.
Weerarkaas ayaa sida la sheegay waxaa uu ahaa mid ku bilaawday gaari laga soo buuxiyay waxyaabah qarxa,isla markaana ay Al-Shabaab la beegsadeen Saldhiga Ciidamada ee Ceel-Saliini,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal mudo saacado ah socday.
Guddoomiye Najax ayaa sheegay in Ciidamada dowladda ay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab,isaga oo sheegay in uu guul u rajeynayo Ciidamada Dowladda ee la dagaalamay Al-Shabaab.
Waxaan bogaadinayaa geesiyaasha CXD ee iska difaacay kooxda khawaariijta alshabaab ee weerarka kusoo qaaday deegaanka ceelsaliini ee degmada Awdheegle,Guuleysta geesiyaasha dalkeenow ayuu yiri”Guddoomiye Najax.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay weerarkasi iska difaaceen,isla markaana ay khasaaro ku gaarsiiyeen,hayeeshee Al-Shabaab ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen iany la wareegeen Gacanta ku heynta Saldhiga sidoo kalena ay askar badan ku dileen hubna ku qabsadeen.
Previous articleAkhriso: Dowladda oo amar hor leh kusoo rogtay Diyaaradaha u duulaya Kismaayo
Next articleC/raxmaan C/shakuur “Wixii dalka ka dhaca AMISOM ayaa mas’uul ka ah, eedeedana ayadaa leh”